Farshaxanimada Maalinta Hooyada iyaga oo gacmahooda u gudbinaya dugsiga iyo xanaanada, talaabo talaabo talaabo ah iyo fiidiyoow - Farshaxanka fudud iyo kuwa asalka ah ee laga sameeyey warqad midab leh iyo suuf
Farshaxanka loogu talagalay Maalinta Hooyada iyaga oo gacmahooda u gudbinaya iskuulka iyo xanaanada, fasalada masterka leh sawiro iyo fiidiyoow. Farshaxanka fudud iyo kuwa asalka ah ee farshaxanka laga bilaabo warqad midab leh iyo maqaayad
Maalinta fasaxa ah, kumanaan wiil iyo gabdho ayaa waxay la yaaban yihiin waxa nasiibka u ah Maalinta Hooyada iyaga oo samayn kara gacmahooda, iyada oo aan waalidiinta u soo jiidin geedi socodkan mashquulka ah, sidaas darteed hadiyaddu waa wax la yaab leh hooyada!
Xaaladahan waxaa ka wanaagsan in ay ka faa'iideystaan ​​fasalada aasaasiga ah ee asaasiga ah si ay u abuuraan farshaxan caruureed oo cad oo ka samaysan warqad iyo maqaar. Alaabta caanka ah waxay ku yaalaan aqal kasta oo ay carruurtu ku nool yihiin, sidaa daraadeed ma jiri doonto wax dhibaato ah oo ku yimaada helitaanka "qalabka ceyriinka" ee loogu talo galay. Waxyaabo kale - farshaxanka Maalinta Hooyada ee dugsiga iyo xanaanada. Ma jirto hab wax looga qaban karo iyada oo aan hooyada, aabaha ama aabaha caawimaad. Ka dib oo dhan, badeecada bandhig ama tartan waa inay ahaataa mid aad u fiican. Waa hagaag, ku xiga wax walba oo ku habboon!
Nalalka fudud ee carruurta ee Maalinta Hooyada iyaga oo gacmahooda iska leh - fasal mihnadeed oo leh sawirro talaabo iyo talaabo talaabo ah
Applikatsiya iyo wejiga - farsamooyinka ugu caansan ee loogu talagalay carruurta gacmahooda fudud gacmahooda. Laga soo bilaabo qaybaha caadiga ah ee warqad dhalaalaya iyo xabagta oo fudud, waxaad abuuri kartaa jilayaasha dhabta ah. Tusaale ahaan, kalluun qumo leh oo qumman. Carruurtu waxay jecel yihiin in ay geeddi-socodka ay abuuraan, hooyooyinkuna waxay ku farxi doonaan wax aan caadi ahayn, laakiin isla markaa carruurta sahlan ee farsamooyinka maalinta hooyadood.
Waxyaabaha lagama maarmaanka u ah farsamada carruurta ee sahlan Maalinta Hooyada
xaashida ballaaran ee kaararka cad
warqad casaan oo casaan ah
warqad madow ama midab leh
Caartar PVA ah
Tilmaamaha samaynta farshaxanka carruurta ee fudud ee Maalinta Hooyada - sawiro iyo fiidiyowyo talaabo tallaabo ah
Isticmaalida qaabkayaga kalluunka, u eegi sawirkaaga xaashi ballaaran oo kaarar ah.
Kaarka casaanka cas, ku sawir jilbaha iyo fiinbiyada. Faafi faahfaahinta ama ku amar hawsha ilmahaaga.
Si aad u xoqdo jirka kalluunka, ka dhig miisaanka. Si arrintan loo sameeyo, waxaad jarjartaa warqad madow oo leh dhuuban khafiif ah. Baaxadda qayb kasta oo kasta waa inay ahaataa 1 cm, iyo dhererka - 4 cm.
Dhar kasta wuxuu kudhufaa qeybtii oo wuxuu sameeyaa "dhibic", sida sawirka. Isticmaal qalfoofka PVA ama qalin-qori.
Ku bilaw qeybaha dhameystiran, raacitaanka xariiqa garabka iyo qaybta madaxa. Isticmaal walxaha midabada qaab kale ama qaanso roobeed.
Qayb kasta oo xiga ee "dhibco" ah ayaa si tartiib ah u dhaqaajiya mid hore. Sidaa darteed, waxaa suurtogal ah in dib loo furo saamaynta "miisaanka kalluunka". Buuxi safarada isku midka ah ee dhammaan kalluunka.
Waraaqaha qoraxda, casaan, madow iyo madow oo la jarjaray 1x1 cm oo karoon, mid kasta oo ka mid ah, su'aal ka bixi dhammaadka qalin-qoriga, sameynta taayirrada, sida sawirka.
Dhamaan meelaha banaan waxaa lagu dhajiyaa midba midka kale ee saldhigga jira. Madow iyo caddaan - indho, casaan - af, qaybo dabacsan oo madaxa ah.
Inta lagu jiro shaqada, hubi inaanay jirin wax u dhaxeeya faahfaahinta iyo khaladaadka kale ee khaldan. Si aad u hagaajisid dhammaadka shaqada ayaa aad u sii adag.
Marka jirridda iyo madaxu ay si buuxda u buuxsamaan, ku dheji khafiifka hore ee daboolka iyo daboolka. Kalluunka roobka ee Maalinta Hooyada waa diyaar!
Xirfadaha nalalka dharka leh gacmahooda ku jira Maalinta Hooyada ee xanaanada - talaabo talaabo iyo cajalado fara badan
Maxay noqon kartaa mid sahlan marka loo eego farshaxanno asal ah oo ka samaysan dharka nabraha ilaa Maalinta Hooyada ee xanaanada? Gabbalaha iftiinka ah, oo uu abuuray farsamooyin isku dhafan, wuxuu noqon doonaa hadiyad macaan ee hooyada ku jirta matoorka mawduuca ah, oo lagu soo koobo bandhig farshaxan leh oo carruurta lagu soo bandhigo oo ay sii kordhiso waxqabadka dhabta ah ee ilmaheeda. Ka faa'iideyso fasalkeena miisaankeena oo ka caawi ilmaha in uu la qabsado farshaxanka qorraxda ee Maalinta Hooyada ee xanaanada. Ama ka tag "hal abuuraha" mid ka mid ah asalkiisa yar.
Qalabyada loo baahan yahay ee farshaxanka ee xannaanada carruurta ee sharafta Maalinta Hooyada
xaashi cad oo A4 cad
calaamad dareen ah oo cagaaran
tirtirka jaalaha ah
Waxbarashada tallaabo tallaabo ah oo loogu talagalay farshaxanimada maqaarka oo ku saabsan Maalinta Hooyada ee fasalka xanaanada - fasal sare leh sawir iyo muuqaal
U hubso inaad haysato dhammaan qalabka lagama maarmaanka ah. Sababtoo ah nabraha madow ee loogu talagalay asaasiga qorraxdu waa ay adag tahay in la helo, beddel burgundy, cagaar madow ama bunni.
Iska yaree cidhibta dharka isgoysyada oo jarjar geli 4 qaybood oo siman.
Laga soo bilaabo jibbaarada jaalaha ah xargaha saddex xagalkan loo yaqaan 'tings'. Cagaar iyo maroon isku dhex geli kubadaha caleemaha iyo dhirta.
Warqad warqad ah, sawir qaylo dhoobo leh oo leh stem dheer. Waxaad isticmaali kartaa shaashadeena.
Ku dhaji jaleecada jaalaha ah ee goobada. Ku darso dhexda ubaxa si deeqsinimo leh leh laalaab oo buuxi maro maroon. Si la mid ah, dabooli caleemaha gabbaldayaha. Dib-u-rinjin asliga ah leh calaamad cagaaran ama qalin dareemo.
Nacfiga dhalaalaya oo aan caadi ahayn ee nuugista ee maalinta hooyada ee xanaanada waa diyaar!
Farshaxanka asalka ah ee Maalinta Hooyada iyaga oo gacmahooda u gudbinaya dugsiga (darajada 1aad) - sawiro iyo fiidiyowyo talaabo talaabo ah
Owl waa calaamad muujinaysa xigmadda quruumaha badan ee aduunka. Abaal-marinta asalka ah ee Maalinta Hooyada ee qaabka dabeecaddan cajiibka ah ma aha oo kaliya fadlan waalidkiisa jecel, laakiin sidoo kale waxay noqoneysaa caddayn cad oo muujinaysa miyirka qoto dheer, xikmad darajo iyo jahwareer daa'im ah si loo xaliyo. Handbag-owl, sida handmade on Maalinta Hooyada - doorasho fiican. Tani waa badeecooyin hadiyad ah oo hadiyad ah iyo baakad yar oo qurux badan oo loogu talagalay soo bandhigid yar.
Waxyaabaha loo baahanyahay ee loogu talagalay farshaxanka carruurta ee dugsiga ku yaal Maalinta Hooyada
cufnaanta cufan ee buluug ah
xabbadood oo jaale ah oo casaan ah, casaan, cagaar iyo midab
warqad caddayn ah oo caddaan ah
labajibbaar maro isku dhejisan
midab buluug ah
feerka xiirta cad
Tilmaan-bixinta asaasiga ah ee farshaxanka ah ee loogu talagalay Maalinta Hooyada ee darajada 1aad ee dugsiga - fasal sare oo heer sare ah oo leh sawir iyo muuqaal
Si aad u abuurto boorsada boorka oo aan caadi ahayn oo aan caadi ahayn, ku daabac oo isticmaal shaashadda hoose sida sheyga.
Turjumadda ku qor xaashida buluugga ah ee buluugga ah, si taxadar leh u gooyo qulqulka oo ku dheji meelaha ay ku qoran yihiin xariiqda dhibcaha.
Isticmaal qalabka kor ku xusan, gooyo qurxinta lagama maarmaanka u ah - indhaha, baalasha, boogaha, dhegaha, iwm. Qaar ka mid ah ayaa gacanta lagu soo qaadi karaa.
Daabac faylasha ku daabac qoraxda warqadda cufan ee cufan oo si taxadar leh u gooyaa qulqulka mindida qalabka wax lagu qoro ama maqaarka manicure.
Ku qurxin qaybta shaqada ee la furay qaybaha laga gooyey dibadda. Si aad u siisid walxaha mug weyn, ku dhaji on cajalad duub ah oo labajibaaran.
Qaybo yaryar oo ah cajalad caleenta ah ama jajab xoog leh ayaa loo isticmaali doonaa saadaasha isku xirka loogu talagalay duufaanta.
Isu ururi boorsada gacantaada oo si adag ugu cadaadida isgoysyada. Ka samee dalool meel sare oo ka mid ah madaxa shimbirta adigoo godka ku xiraya. Ku dhaaf weelka xargaha oo xidh foornada quruxda badan ee satin.
Farshaxanka ka soo baxa warqad midab leh oo leh gacmahooda maalinta Maalinta Hooyada ee xanaanada ama dugsiga: aqoon isweydaarsi ku saleysan
Farshaxan farabadan oo midabkiisu badan yahay oo leh riyooyin waa hibo cajiib ah oo loogu talagalay hooyada. Abuuray by gacmaha ilmaha, waxay u faafi doonaa diirimaad aan la arki karin iyo diiriya waalidka jecel leh dadaalka ilmaha iyo qiiro. Qoraalkan midabaysan ee warqadda midabada leh ayaa ah midka ugu wanaagsan ee loogu talagalay Maalinta Hooyada iyo bandhig tayo sare leh oo muujinaya bandhigyada shahaadooyinka dugsiga. Raac jadwalkeena sayniska, iyo abuurista chamomile xamaasad leh oo ku faraxsan kuma siin doono dhibaato kasta.
Qalabyada lagama maarmaanka ah ee sameynta hooyo-sameynta Maalinta
xaashida warqadaha xafiisyada midabka leh ama mid madow
mindi qalabaysan ama maqas
casaan khafiif ah
labajibbaar ah oo labajibbaaran leh ama super-adhesive
kala badh iyo badhidoono
Tilmaamaha loogu talagalay farshaxanka laga soo qaado warqad midab leh illaa xannaanada ama dugsiga Maalinta Hooyada - sawiro talaabo talaabo iyo fiidiyoow
Si loo abuuro hambalyo hambalyo leh oo loogu talagalay Maalinta Hooyada, waxaad u adeegsataa hambalyo. Haddii ay jiraan wax ku filan oo waqti iyo dhiirigelin ah, waxaad daabici kartaa oo aad gooyn kartaa shaashado bannaan oo aad ku qori kartaa salaan shakhsi ahaaneed.
Waxaad daabacdaa meelaha bannaan ee kor ku xusan warqad xafiis oo dhejis ah. Iska yaree xayawaanka maqaarka leh, iyada oo aan waxyeello u keenin tufaaxa.
Ku dar fooriinka isku midka ah hal mid, midabo kala duwan, ku dheji daboolka dheeriga ah ama ku xoqaya dhejiyaha. Laga soo bilaabo casaankii cas, gooyaa wareegga u dhiganta dhexroorka dhexe ee ubaxa.
Qaybta jamacada, waxay soo ururisaa shaxan yar oo ka sameysan. Iska yaree 8 xayndaab oo isku mid ah oo warqad ah, ka dibna isku laab mid kasta oo ka mid ah qaybaha xayawaanka. Ku soo ururi xuddunta adoo isku xiraya dhammaan hababka ku wareegsan.
Isticmaal goobo hore loo gooyey, ku dheji rinjiga satin khafiif ah xagga dambe ee ubaxa leh wareega. Si aad tan u sameyso, ku dheji dhinaca danbe ee adigoo ku dhejinaya, ku dhaji labada gees oo bilaash ah oo cajalad ku duub oo ku dabool wareega.
Dhinaca hore ee daisy, ku dhaji dhexe ee farsamada origami. Ku qurxin barta badhka ama strazik. Tani waxay ka dhigeysaa soo saarista farshaxan cad oo warqad midab leh maalinta hooyada oo dhammeystiran!
Farshaxanka caruurta ee Maalinta Hooyada iyaga oo gacmahooda ka sameysanaya suugaan, warqad midabo, kartoon ama qalab kale oo waxtar leh - hadiyadii ugu wanaagsanayd ee hooyada jecel, qayb ka mid ah nuuga ilmaha, bog ka mid ah xasuusta sannado badan. Carruurta yaryar ee fudud waxay carruurtooda samayn karaan, laakiin waxay abuurayaan alaabta saxda ah ee dugsiga iyo xanaanada carruurta iyada oo aan waalidkoodu ka caawin karin!
Waxa la siinayo Sannadka Cusub 2018: 5 fikradaha miisaaniyada ee aad jeceshahay!
Stengazeta (farriin) loogu talagalay Maalinta Hooyada ee 2017 iyada oo gacmohoodu yahay - qaabab iyo sawirro loogu talagalay xanaanada iyo dugsiga
Palm Sunday - Hambalyo ku ah qadarin iyo gabay. Farxad farabadan oo qurux badan oo ku saabsan Palm Sunday
Sheeko taabasho ah oo hooyadeed ayeey ka dhalatay gabadheeda iyo wiilkeeda. "Hooyaday ayaa ah tan ugu fiican adduunka" iyo heesaha kale ee carruurta iyo dadka waaweyn ee ku saabsan hooyaday iyadoo leh hees iyo muusik
Kalfadhiga quruxda badan ee wicitaankii ugu danbeeyay - laga bilaabo waalidiinta, ardayda ka qalin jabisay 9 iyo 11 fasalka, macalinka fasalka, maamulka iskuulka
Qurxoon qurux badan leh Easter 2016. Sida loo ugu hambalyeeyo Easter - SMS gaaban. Easter - sms-funny sms
Mucaawin ee Blessed Virgin Mary 2017: calaamadaha, caado iyo hambalyo
Sidee iyo goorma ayey u fiicantahay in la bilaabo in la bilaabo cunuga dheriga
Midabka timaha cusub
Maraq leh bur buro jilicsan "Fasaxa ka dib"
Qubabka cagaha: sida faa'iido leh, sida loo doorto, talooyin
Sidee loo badbaadin karaa naftaada iyo qoyskaaga weerarada hooyada
Xilliga faraxada waa la joojiyay: Karina Mishulina mar kale waxay ku eedeysaa Timur Eremeev
Sidee si tartiib ah u ilaalineysaa quruxda maqaarka inta lagu jiro uurka
Habka dadka ee si wax ku ool ah uga takhalusi lahaayeen laalaabkii
Wiilkii Valery Arseny Shulgin ayaa guriga ka tegay
Horgalinta galmada: Aries, Taurus, Gemini
Qalabka qurxinta ee carruurta
Haweenka Indian qarsoodi ah
Fikrado ku jira foornada mikrowaq
Qorista taariikhda Sophia Loren
Iskuduwaha, oo ku saabsan ragga ragga ah